Semalt: Umhlahlandlela Wabaqalayo Ngendlela Yokufaka I-WordPress Plugin
Lesi siqondiso sizosebenza kuphela kulabo abasebenzisa i-wordpress.org. Kubantu abasebenzisa i-wordpress.com, akunakwenzeka ukufaka ama-plugin ngenxa yeminye imikhawulo yawo. Kubalulekile ukwakha iwebhusayithi ye-wordpress.org eyayizimele ukuze ukwazi ukusebenzisa ama-plugin. Kunezindlela eziningi lapho umuntu angakwazi ukufaka i-plugin wp. Isibonelo, ungakwazi ukufaka i-plugin ye-WordPress ngokuyihlola ku-console yokucinga, ngokuyilayisha noma ukufaka i-plugin wpp usebenzisa i-FTP.
Landela lawa macebiso kusuka ku-Artem Abgarian, isazi esiphakeme kusuka ku Semalt , futhi uzophumelela ngokuqinisekile.
1. Faka i-plugin ye-wp usebenzisa i-WordPress Plugin Search
Enye yezindlela eziqondile kakhulu zokufaka i-plugin ye-wp iwukuyihlola kuyi-console yokucinga. Ngalolu khetho, ungathola ukufinyelela kuma-plugin amaningi asekhona ku-directory ye-plugin ye-WordPress. Ungakhiye kunoma yimuphi umbuzo wosesho bese uthola i-plugin evumelana nesidingo sakho. Uma uyifaka, i-WordPress ikulanda bese ikubeka yona. Uma inqubo iphumelele, uthola umlayezo wokuqinisekisa wokuqalisa i-plugin. Ungabuyela futhi kufaki ye-plugin.
Ukuze i-plugin isebenze, kufanele ukhumbule ukuyisebenzisa..Kubalulekile ukuqaphela ukuthi wonke ama-plugin anezilungiselelo ezihlukile. Lokhu kusho ukuthi kunezindlela ezahlukene ezidingekayo ukuthi zilungiswe. Lezi zindlela ngeke zihlanganiswe kule nhlahlandlela. Enye yeqhinga le ndlela ukuthi ungakwazi kuphela ukufaka ama-plugin mahhala. Kwezinye izimo eziyingqayizivele, kungase kudingeke ukuthi ufake i-plugin ayitholakali kule ncwadi.
2. Faka i-plugin ye-wp usebenzisa i-WordPress Admin Plugin Upload
Kwezinye izimo, ungadinga ukufaka ama-plugin akhokhelwayo kuwebhusayithi yakho ye-wp. Kulesi simo, i-console yokucinga ayikwazi ukukusiza. I-WordPress inezinsizakalo zokulayisha endaweni yomqondisi engakuvumela ukufaka i-plugin ku-console yayo. Udinga ukulanda i-plugin evela kumthombo wamazwe omhlaba. Emva kwalokho, udinga ukungena ngemvume kuthebhu yakho ye-wp-admin, iya kuma-plugin bese wengeza ikhasi elisha.
Kusukela kuleli phuzu, ungachofoza inkinobho yokulayisha i-plugin. Layisha leli fayela kusuka kusiqondisi sakho se-PC. I-WordPress izolayisha futhi ifake le plugin kuwe. Njengendlela ekhonjiwe, ngemuva kokufaka ngempumelelo, ungasebenzisa i-plugin noma ubuyele ekhasini le-plugin. Zonke izilungiselelo zijwayele ukuklama kwe-plugin.
3. Faka ngokuzenzakalelayo i-WordPress Plugin usebenzisa i-FTP
Kwezinye izikhathi ezithile, umhlinzeki wakho we-wp wokusingatha angase abe nemikhawulo ethile yefayili enganciphisa ukuguquguquka kwakho kokufaka i-plugin kusuka endaweni yomqondisi. Kulesi simo, ukufaka i-wp plugin nge-FTP kuyindlela engcono kakhulu. Ngisho nabaqalayo bangakwazi ukulawula kalula umphathi we-FTP. Okokuqala, kufanele ulanda futhi ususe ifayela le-zip le-plugin yakho kukhompyutheni yakho. Kusukela kuleli phuzu, kungadingeka ulayishe i-plugin kwisiphakeli sakho se-wp sokusingatha usebenzisa iklayenti le-FTP. Umhlinzeki wakho we-wp hosting anganikeza umphathi we-FTP kuwebhusayithi yakho. Kanye kumphathi we-FTP, ungayengeza kwi-path / wp-content / plugins / directory yesiphakeli sakho.